5 Amathiphu Ukuze Okuhambayo ngu zemininingwane EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 Amathiphu Ukuze Okuhambayo ngu zemininingwane EYurophu
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 18/02/2020)
Bheka futhi nakho nokunye okuningi nge ingenela isitimela adventure European. Ukuhamba ngesitimela eYurophu indlela quintessential ngoba babuka Europe futhi akuyona imfihlakalo kungani. I inethiwekhi wesitimela kuyinto athuthukile kakhulu ngakho abahambi singalinqoba emazweni amaningi namasiko e akukhumbulayo ngolunye uhambo oludumile. Njenganoma iyiphi ifomu ikhambo, kukuhle qobo ukuqinisekisa ukuthi une uhambo elula futhi kujabulise kakhulu kungenzeka. Nazi yethu 5 amathiphu ehamba ngesitimela eYurophu.
Uma Izikhangibavakashi Ngenhla 14 izinsuku – Cwaninga ezahlukene wesitimela maqembu
Uma uhlela ukubona emazweni amaningi ngenkathi ehamba ngesitimela eYurophu kungase kube ukuhlakanipha ukucabangela sitshala imali i Interrail Pass, noma yini-non izakhamuzi EU ushayele Eurail. Kuvele Interrail Pass kuzokwenza travel isitimela Kalula nakakhulu. Nokho, uma kwi isabelomali baqaphe, amathikithi ngamunye angase zifezeke eshibhile (ikakhulukazi uma ikakhulukazi ukuhamba empumalanga Germany). Cabanga ibhajethi yakho futhi uqale ngokwenza ucwaningo ngaphambi ukubhuka wesitimela pass wakho. iWebsite yethu saveatrain.com kuyinto enhle ukuba uqale ukusiza ukuhlela uhambo lwakho yonkana Europe.
Zama agcinele izihlalo zakho
amathikithi zemininingwane futhi isihlalo ukubhuka yizinto ezimbili ezahlukene. Ithikithi ikuvumela ukuba bagibele isitimela, futhi ukubhuka kuqinisekisa isihlalo esitimeleni ethize. Ngaphambi uhambo lwakho uqiniseke ukuthi uyakuqonda ukuthi isitimela yakho idinga, uncoma, noma alamukeli isihlalo ukubhuka.
Uma kwenzeka, zama agcinele esihlalweni sakho, ikakhulukazi uma uhamba emazweni Uber popular ezifana France, Italy noma Spain. Ukuze wokujikeleza kakhulu ngesitimela eYurophu, akudingekile agcinele esihlalweni sakho, Nokho, begibela isitimela bese ethemba ukuthola okuncono akuwona umqondo omuhle. Ungase utshele ukuphuma esihlalweni sakho maphakathi uhambo uma omunye umuntu ibibhukelwe ke. Ngokuba igcinelwe indawo yakho, ungakhetha ukuthi ungathanda i yezinto noma iwindi esihlalweni. Ungakwazi asonge izandla ujabulele ngesitimela Ukwazi ngeke uphazanyiswe ukuhambisa.
Gcina izinto zakho iphephile
Ukuhamba ngesitimela eYurophu njengoba omunye eyaziwa izindlela ephephile ukuhamba. Nokho, kubalulekile ukugcina iso out for pickpocketers, ikakhulukazi nge izitimela ukuthi ayeke emadolobheni amakhulu. Ungashiyi imithwalo yakho olungalawuliwe lungadala esitimeleni noma esiteshini. On izitimela ebusuku, uma uhlose ukulala, qiniseka ukuze uvikele wemithwalo kuya ebhasikidini nge ibhayisikili Ilokhi encane. Ukuze ube nokuthula kwengqondo, ukugqoka iphakethe okhalweni ngaphansi izingubo zakho ukuba ziqhubeke passport yakho, ifoni futhi nanoma yimiphi imibhalo ebalulekile evikelwe kusuka kunoma iyiphi amasela ezingaba.
Okuncane okuningi – amathiphu ehamba ngesitimela eYurophu
Ukuhambisa kuye ngamazwe noma umuzi ngomuzi kuyinto mnandi uhambo. Nokho, uhambo bangaba kuyakhathaza uma mthwalo osindayo. Pakisha okusemqoka futhi ushiye noma yiziphi izinto noma imikhiqizo kungukuthi ezidingekayo ngemva.
Kuye isitimela uhambela ku, lapho kungaba elinganiselwe isitoreji isikhala phezu kwesihlalo Racks kanye emashalofini lapho ehamba ngesitimela eYurophu. Esikhundleni se ephethe ipotimende elikhulu futhi esindayo, imfanelo ubhaka engasindi kungenye indlela unciphise umthwalo wakho.
Pakisha izimpahla esifanele uhambo ngoba ehamba ngesitimela eYurophu
Ukuhamba ngesitimela eYurophu inikeza ukubukwa ukuthusa; Nokho, kuwumqondo omuhle ukuletha izintwana ezimbalwa key ukukusiza kudlule isikhathi ikakhulukazi uma bathathe uhambo engaphezu kuka 2 amahora. Funda incwadi, buka ibhayisikobho kwithebhulethi yakho, ukubhala ekuvakasheni umagazini noma ingxoxo nomunye umgibeli futhi ngaphambi kokuthi wazi uzobe lapho uya khona eduze.
izitimela Iningi ongayo yokudlela, cafe namakalishi noma isidlo ezinqoleni ukuthi beze ngokuthengisa sandwich, iziphuzo ezibandayo futhi ngaphezulu. Kodwa uma imali wokujikeleza Friend noma une ethize izidingo zokudla, kuwukuhlakanipha ukuba alethe abathile Ungadla nawe endleleni yakho.
Ucabanga wokujikeleza ngesitimela eYurophu? Iya ku Londoloza Isitimela inthanethi ukuze uhlole zonke fares yethu kwekhethelo futhi uqale uhlela adventure wakho olandelayo!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/5-tips-for-traveling-by-train-in-europe/ - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
amathiphu isitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi amathiphu isitimela sokuvakasha traveltips